लोकसेवाको रोकिएका परीक्षा दशैंअघिबाटै, कुन परीक्षा कहिले ? « Naya Page
लोकसेवाको रोकिएका परीक्षा दशैंअघिबाटै, कुन परीक्षा कहिले ?
प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०७७, शुक्रबार ००:००
काठमाडौं, ९ असोज । लोकसेवा आयोगले लकडाउनका कारण रोकिएका परीक्षाहरु दशैं अगाडिबाटै शुरु गर्ने तयारी थालेको छ ।
लामो समयदेखि रोकिएका विभिन्न परीक्ष अगाडि बढाउन आयोगले नयाँ तालिका सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले आज (शुक्रबार) शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा र स्थानीय तहतर्फ सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको हो ।
आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीका अनुसार न्याय सेवातर्फका अधिकृत पदको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो पत्रको परीक्षा क्रमशः कात्तिक १८, १९ र २० गते हुनेछ ।
व्यवस्थापिका संसदतर्फ (आन्तरिक प्रतिस्पर्धा)को पहिलो पत्रको परीक्षा कात्तिक २१ गते र दोस्रो पत्रको परीक्षा कात्तिक २२ गते हुनेछ ।
यस्तै परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण र संसद सेवातर्फ खुला तथा समावेशी परीक्षा कात्तिक २३ गतेदेखि सुरु हुनेछ ।
नायब सुब्बा पदको द्वितीय पत्रको परीक्षा मंसिर ७ गते हुने छ । तृतीय पत्रको परीक्षा मंसिर ८, ९, १० र ११ गते तोकिएको छ । परराष्ट्रतर्फ अंग्रेजी र कूटनीति विषयको परीक्षा भने मंसिर १२ गते हुने आयोगले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
सहायक महिला विकास निरीक्षकको परीक्षा २५ असोजदेखि
स्थानीय तहतर्फ सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको अन्तर्वार्ता तथा कम्प्युटर सीप परीक्षण यही असोज २५, २६ र २७ गते हुने छ । अन्तरवार्ता र कम्प्युटर सीप परीक्षण लोक सेवा आयोगकै केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा बिहान ७ः२० बजेबाट सुरु हुने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।
पूर्व प्रकाशित लिखित नतिजाको सूचनामा तोकिएअनुसारकै कागजात लिएर निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा अगाडि नै परीक्षा केन्द्रमा आउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदीले तोकिएको स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर परीक्षा लिइने जानकारी दिए । ‘कोरोना संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा सन्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड आयोगबाट स्वीकृत भएपछि सोही बमोजिम परीक्षा सञ्चालनको प्रबन्ध मिलाइने छ,’ उनले भने ।
दशैंअघि नै सहसचिवको परीक्षा
लोकसेवा आयोगले अन्तिम समयमा स्थगित गरेको सहसचिव सरहको सूचना प्रविधि विज्ञ पदको परीक्षाको नयाँ तालिका पनि आजै सार्वजनिक गरेको छ ।
नेपाल कृषि सेवा लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट र नेपाल विविध सेवाको परीक्षा दशैं अगाडि नै हुनेछ । आयोगले शुक्रबार जारी गरेको सूचना अनुसार नेपाल कृषि सेवा लाइभस्टक पोल्ट्री एण्ड डेरी डेभलपमेन्ट पदको प्रथम र द्वितीय पत्रको परीक्षा क्रमशः यही असोज २७ र २८ गते हुने छ ।
यसैगरी नेपाल विविध सेवा तर्फको परीक्षा असोज २९ र ३० गते हुने छ । दुवै परीक्षाहरु लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरमा बिहान ८ बजे तोकिएको छ । यसअघि यो पदको लिखित परीक्षा आयोगले लिइसकेको थियो । तर अन्तिम समयमा ‘विशेष कारण’ देखाउँदै आयोगले परीक्षा रद्द गरेको थियो ।
दशैंमा पनि सुनसान सीमा नाका
पार्किङ गरेर राखिएको गाउँपालिकाको गाडी तोडफोड
डोल्पामा खाद्य संकट : ऋण काढेर छाक टार्दै सर्वसाधरण
मध्यपहाडी राजमार्ग : चार महिनामा ५० किमी कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य, काम भने दुई किमी मात्र
महेन्द्रनगर, ३ कार्तिक । चाडपर्वका बेला गन्तव्यमा जाने यात्रुहरूको चाप हुने कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाका र
हुम्ला, ३ कार्तिक । मदिरा सेवन गरेर मातिएका एक जनाले हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिकाको गाडी तोडफोड
डोल्पा, ३ कार्तिक । करिव ५० वर्षको देखिने उपल्लो डोल्पाका नेयार भोटेको मुखाकृति देख्दैमा थाहा
२०७७ कार्तिक ३ गते सोमबारको तपाईको राशिफल
‘कोरोना उपचारमा प्रभावहीन’ भनिएको औषधि आयात–विक्री गर्न तीन कम्पनीलाई सरकारको अनुमति
अर्थमन्त्री पौडेल यात्रा : गोपीरमण र प्रदिप नेपालको प्रेरणाले कम्युनिष्ट
२०७७ असोज ३० गते शुक्रबारको तपाईको राशिफल
मन्त्रीपरिषद् हेरफेरमा असन्तुष्ट शिर्ष नेता सपथ ग्रहणमा सहभागी भएनन्
२०७७ असोज २९ गते बिहीबारको तपाईको राशिफल
प्रधानमन्त्रीले थपे तीन मन्त्री : विष्णु पौडेल बने अर्थमन्त्री, ईश्वर पोखरेलको खोसियो मन्त्रालय
२०७७ असोज २८ गते बुधबारको तपाईको राशिफल
माधव नेपाल समूहले दियो कर्णालीमा तीन मन्त्री र सचेतकको नाम